मदन भण्डारीलाई खुकुरी हान्दा जसले थापे गर्धन | Seto Khabar
मदन भण्डारीलाई खुकुरी हान्दा जसले थापे गर्धन
फोटो नयाँपत्रिकाबाट साभार
दाहिने हात अचेतजस्तै छ । देब्रे हात चलाउन न्वारनदेखिको बल निकाल्नुपर्छ । दाहिने गोडा पनि चल्दैन । दाहिने हर नै लगभग निष्क्रिय छ । यस्तो हालतमा छन्, कुमार गुरुङ । कुमारको मनभित्रै अभिव्यक्ति बोली दाजु दिलबहादुरले बोलिदिए, ‘अहिले त ऊ धेरै नै सुधार भएको हो, १९ वर्षअघि त दाहिने हर नै चल्दैनथ्यो, मुख बांगिएर कानसम्म पुगेको थियो ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
कुमारलाई तत्काल ओम हस्पिटल लगियो । डा. उपेन्द्र देवकोटालाई देखाइयो । ‘उपेन्द्रले तामिलनाडुस्थित भेलोर अस्पताल लैजान सल्लाह दिनुभयो, तर तत्काल सम्भव भएन,’ दिलबहादुरले पीडा सुनाए, ‘धेरै रकम लाग्थ्यो, कहाँबाट ल्याउनु ? त्यसैले टिचिङ अस्पताल लगेर भर्ना गर्‍यौँ ।’अब दिलबहादुरलाई घटना सुनाउन अप्ठ्यारो भयो । कुमारले पनि अनुहार मलीन पारे । सायद घटना सम्झिन थाले, जीवनमा बज्रपात भएको । मैले बिस्तारै सोधेँ, अनि के भयो दाइ ? दिलबहादुरले आफूलाई नियन्त्रण गर्दै अगाडि सुनाए, ‘बानेश्वरको भीमसेनगोलाको चुनावी प्रचारमा एक हुल युवा भण्डारीको छेउमा आएछन् । हातमा रड, खुकुरी र खुँडा बोकेका जत्था भण्डारीमाथि आइलागेपछि ऊ (कुमार) अघि बढेछ र आफ्नो गर्धन थापेछ । त्यही घटनामा टाउको र ढाडमा गम्भीर चोट लाग्यो । तत्कालै वीर अस्पताल लगेर उपचार गरेपछि केही सामान्य भयो ।’ कुमारको राजनीति र आन्दोलनको घटना स्पष्ट बुझ्न एमाले युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीलाई सम्पर्क गरेँ । उनले दिलबहादुरकै भाषामा कुमारबारे सुनाए । कुमारले मदनको गर्धनमा ताकिएको खुकुरी आफूलाई थापेर छेकेको बताए ।